Malunga nathi - i-Hebei Joyroll Conveyor Machinery Co., Ltd.
I-Hebei Joyroll Conveyor Machinery Co, Ltd.
Sigxininisa kumgaqo-nkqubo osemgangathweni "woMgangatho bubomi bethu, Udumo likamva lethu, Ukoneliseka kukusukela kwethu, Ukuphucula injongo yethu", kunye nesiqinisekiso sokubonelela ngeemveliso ezilungileyo kubathengi bethu.
I-Hebei Joyroll Conveyor Machinery Co, Ltd.eyasekwa ngo-2008, i umenzi ngobuchule yokuthutha ibhanti kunye namalungu. Efektri yethu ibekwe feixiang park mveliso, handan isixeko, kwiphondo hebei, China, egubungele 33000 square metres. Umzi-mveliso wethu unelizwe lokuqhubela phambili elizenzekelayo lokuhambisa imveliso yokuhambisa umgca, unemigangatho yokuqhubela phambili yokuhambisa umgubo, kunye noluhlu olupheleleyo lwezixhobo zokuvavanya izixhobo zokuvavanya, imveliso yemveliso yonyaka engama-600,000 ii-pcs zokuhambisa ii-roller roller. Singavelisa uhlobo oluqhelekileyo lwesiTshayina lwe-TD75 kunye nohlobo lwe-DT II, ​​sinokuvelisa i-idler roller ngokwemigangatho yamanye amazwe, njenge-DIN, AS, JIS, CEMA, SANS-SABS, GOST, AFNOR njl. ukumelana okujikelezayo, ubungqina bothuli, ubungqina bamanzi, ingxolo ephantsi, ojikeleza kakuhle, ugcino lwamandla, inkonzo ende ngaphezulu kweyure ye-50,000.
Inqanaba lobuchwephesha kwimveliso yeJoyroll kunye nomgangatho wemveliso ufumene ukwamkelwa kwabathengi ekhaya nakumazwe aphesheya, iimveliso zisetyenziswa kakhulu kumalahle, imigodi, amazibuko, ulwakhiwo, amatye okusila, isityalo samandla ombane kunye namanye amasimi, kwaye zithunyelwa eJamani, Australia, Russia. , EMzantsi Afrika, eBrazil, eIndonesia njalo njalo, kumazwe angaphezu kwama-50 kunye nemimandla.